Onye na-ahụ maka ndị na-ahụ maka China, Decoiler Straightener Feeder, Onye na - emeputa igwe na - enye igwe na - eweta ngwa ngwa
Nkọwa:Pịa emeputa / soplaya, inye Decoiler Straightener Feeder,Ngwunye Egwu Dị Elu, wdg.
Gburugburu nri Line Kpọtụrụ ugbu a
Ngwakọta nri na kọmpat Kpọtụrụ ugbu a
3 n'ime 1 Decoiler jikọtara ọnụ na ndị na-enye nri nri Kpọtụrụ ugbu a
Nhazi Usoro Nhazi Nhazi Nkewa na Nkeji Kpọtụrụ ugbu a
Onye na - eke nri Uncoiler Straigthener Nc Servo Feeder Kpọtụrụ ugbu a
Nri Smart Saver Coil Feed Systems Kpọtụrụ ugbu a
Onye na-enye mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ na Straightener maka Press Line Kpọtụrụ ugbu a
H Frame Speed ​​Speed ​​Press nke na-eme Terminal Kpọtụrụ ugbu a
Bọtịnụ igwe eji agba elu igwe na-eji igwe na-edobe igwe Kpọtụrụ ugbu a
Kọmpat Decoiler Straightener Feeder Kpọtụrụ ugbu a
Igwe eji enye nri akpaaka Kpọtụrụ ugbu a
Kọmpatetị Decoiler Straightener Machine Kpọtụrụ ugbu a
Hydraulic Uncoiler Straghtener igwe Kpọtụrụ ugbu a
Ejikọtara Decoiler Straightener Machine Kpọtụrụ ugbu a
Decoiler Straightener Machine Kpọtụrụ ugbu a
NC Servo Roller Feeder Kpọtụrụ ugbu a
Flọ ọrụ Mayflay bụ ndị nrụpụta dị elu nke ụdị ngwa igwe ihe eji eme ihe na ngwa nri na Press. Ndị na-emepụta Decoilers dị iche iche, ndị na-ahụ maka ịtọ iche iche na Servo feeders, ma nwee ike ịnye ọmarịcha ngwakọta nke 2 n'ime 1 ndị na-eme ihe ndozi na ndị na-ahụ maka ọkụ, na-enwekwa ezigbo ahịrị kọmpụta kọmpụta nke ga-ebelata mbara ala ma meziwanye eri oge n'ụzọ dị egwu coils.
Maylọ ọrụ Mayflay na-amụ teknụzụ ndị Japan ma jiri ụkpụrụ dị elu dị na nhọrọ akụkụ, usoro mgbakọ na akụkụ ahụ, na-elekwasị anya na ịchepụta ma na-enye ihe ngosi, Ngwọta Igwe Ngwọta Cost na-akwụ ụgwọ na akpaaka Stamping Stamping Line. Mayflay tolitere na teknụzụ mbepụ na ọrụ nlebara anya. Mayflay na-enye otu nkwụsị iji dozie nsogbu nke inye eriri ọkpọkọ n'ime ụlọ mgbasa ozi nke ọma, na ịba ụba ngwa ahịa. Taa, Mayflay bụ ụlọ ọrụ raara onwe ya nye nke na-egosipụta akụrụngwa nke nwere ezigbo aha, ikike ọrụ, njikwa ọgbara ọhụrụ, netwo ahịa dị ukwuu, na ahịa dị egwu.
Mayflay abụghị nke kachasị mma n'ụwa, ọnụahịa abụghịkwa ọnụ ala. Mana anyị nwere ike ịnye ngwaahịa kachasị mma iji rute ihe ịchọrọ ma nyere gị aka inweta uru akụ na ụba kachasị.
Metal NC Servo Feeder Machine Kpọtụrụ ugbu a
Igwe eji akporo ngwa ngwa na-eme eyelet Kpọtụrụ ugbu a
Ngwunye igwe eji eme akwa nke Hydraulic Coililing for line Kpọtụrụ ugbu a
Combo Decoiler Straightener Systems Kpọtụrụ ugbu a
Pịa nri Stamping Line Kpọtụrụ ugbu a
Aka oru igwe na igwe nri Kpọtụrụ ugbu a
Ndozi Elu igwe NC Servo Roll Feedl Machine Kpọtụrụ ugbu a
Igwe igweaka na-eme ngwa ngwa na-eme igwe na-eme ngwa ngwa Kpọtụrụ ugbu a
Combo decoiler igwe kwụ ọtọ Kpọtụrụ ugbu a
Kọmpat Dedị Decoiler Cum Straightener & Servo Feeder Kpọtụrụ ugbu a
NC Servo metal Punch Press Feed Machine Kpọtụrụ ugbu a
NC Servo 3 Na 1 Straightener Feeder Uncoiler Kpọtụrụ ugbu a
Copyright © 2020 Mayflay Machinery(huizhou) Co.,LTD Ikike niile echekwala. Kwadoro site na
Pịa emeputa / soplaya
, inye Decoiler Straightener Feeder,Ngwunye Egwu Dị Elu, wdg.